I-solvent extraction - Wikipedia
i-acidi yebhenzina yicatshulwa kwi-organic compound. Isinyibilikisi esisetyenziswayo yi-MTBE. Konke oku kwenziwa kumxube we-Sodium bicarbonate ongxengiweyo. I-Benzoic acid iguqulwa ibe yi-Sodium benzoate. I-Sodium benzoate itshintsha isuka kwisinyibilikisi esi-organic sibe ngamanzi, i-neutral Benzil (iboniswe qanda) yona ihlala ikwinqanaba le-organic. Kule meko, into e-organic ihleli apha ngaphezulu ingaphezulu, kuba i-density yesinyibilikisi esi-organic i-MTBE (0,74 g·cm−3) ingaphantsi kwaleya ikomnye umgangatho (omalunga ne-1,00 g·cm−3).
I-Solvent extraction, ikwaziwa ngokuba yi- Liquid–liquid extraction okanye i-partitioning, yindlela yokwahlula i-compound eyenziwe ku-mxube owezinto zayo. Oku kwenziwa ngokusebenzisa ii-liquids ezimbini ezingadibaniyo, umzekelo, ngamanzi kunye neosinyibilikisi esi-organic.
I-Solvent extraction isetyenziswa xa kusenziwa ii-perfumes, i-vegetable oil, okanye i-biodiesel. Ikwasetyenziswa ukubuyisela i-plutonium ephuma kumafutha kumafutha e-rradiated nuclear, inkquba ebizwa ngokuba yi-nuclear reprocessing. I-plutonium ethe yafunyaniswa ingaphinda isetyenziswe kwakho njenge-nuclear fuel.
Kule nkqubo enye yee-components zemixube inyibilika kwi-liquid ethile nakwezinye ii-components ezinye ii-components zahlulwe njengentsalela eshikele xa bekuhluzwa.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-1 Inyanga kaCanz... 2018, kwi-18:36